काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।
घटना सेलाउन लाग्दा ढिलै भएनि नेपाल बारले महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीको अनसन, अदालतको अवहेलना मुद्दा र सर्वोच्चको आदेशबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतको आदेश वा फैसलालाई लिएर स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्न पाइने भएपनि व्यक्तिगत लान्छना लगाउनु तथा अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु गलत भएको वारको ठहर छ ।
वारले कुनै मुद्धामा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नु परे उजुरी गर्ने निकाय न्याय परिषद् रहेको समेत स्मरण गराएको छ । त्यसै गरि वारले डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशको स्वागत गरेको छ भने प्रधानन्यायधिस पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगातयतका कागजपत्रहरु मगाएकोबारे भनै वार मौननै रहेको छ ।